Yahoo Sports အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（31.3MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Yahoo Sports: watch NFL games
YFL & NBA ဂိမ်းများအပါအ0င် Live Sports ကိုကြည့်ပါ။ အားကစားသတင်းများ, ရမှတ်များနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရလဒ်များနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ရန်သင်လုပ်ဆောင်ချက်၏ဒုတိယအကြိမ်လက်မလျှော့ပါ။
Watch သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် NFLL ဂိမ်းများကိုကြည့်ပါ။ NBA လိဂ် Pass အခမဲ့ Preview Windows နှင့်အတူ NBA ဂိမ်းများပါ0င်ပါ။ သင်နှစ်သက်သောအားကစားအားလုံးမှရမှတ်များနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်များ - ဘေ့စ်ဘော, ဘတ်စကတ်ဘော, ဘောလုံး, ကောလိပ်ဘောလုံးဘောလုံးနှင့်အခြားအရာများ,
သင်၏ Yahoo အကောင့်ဖြင့်အားကစားကြည့်ရှုရန်,
Stream Live NFL ဂိမ်းများ, အားကစားရမှတ်များ, တိုက်ရိုက်အားကစားသတင်းများ, အချိန်ဇယားနှင့်အခြား။ Yahoo Sports ကိုသင်နှစ်သက်သောအကြောင်းပြချက် 3:
1 ။ Watch Live Games - အားကစားနှင့်ယခုရာသီတွင်သင်၏တက်ဘလက်နှင့်ဖုန်းတွင်အားကစားနှင့်တိုက်ရိုက်ကစားနည်းများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
2 ။ သင်အကြိုက်ဆုံးအသင်းများနှင့်ကစားသမားများအကြောင်းနောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်များကိုရယူပါ။3။ ရာသီတိုင်းတွင် loop တွင်နေပါ - အားကစားရမှတ်များ, အချိန်ဇယားများ, စာရင်းဇယားများနှင့်မွမ်းမံမှုများသည်ရာသီဥတုအခြေအနေများ,
• Yahoo Sports နှင့်အတူသင်ရလိမ့်မည်:
Dan Wetzel, Chris Haynes နှင့် Pete Thamel ကဲ့သို့သော Yahoo Spirtritriter မှ Miss မူရင်းသတင်းများနှင့်အားကစားအားလုံးတွင်ထိပ်တန်းသတင်းများနှင့်ထိပ်ဆုံးသတင်းများ မှလွဲ. မရနိုင်ပါ။
•ရမှတ်များရယူပါ ယခုရာသီတွင် NFL နှင့်ကောလိပ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲသည် Kickoff မှ PLAYOFF မှ PLAYOFF နှင့်ကောလိပ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ, NFL, MLB, NBA, NBBL & More Watch Watch NFL Live နှင့် NFL Games & NBA ဂိမ်းများနှင့် MLB & MLB & MLB & MLB & MLB & MLB & MLB & MLB & MLB & MLB & MLB & MLB & MLB & MLB & MLB & MLB & Soccer & Soccer & Soccer & Soccer & Soccer & Soccer & Soccer & Soccer Highlights တို့အားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း။ ရာသီတစ်လျှောက်လုံးအားကစားအထူးများ, ထိပ်တန်းပြဇာတ်များ, ထိပ်တန်းကစားပွဲများကိုကြည့်ပါ။
•ပုံပြင်များအတွက်အရေးအကြီးဆုံးခေါင်းစီးများနှင့်အတူ Yahoo Sportswriters မှသီးသန့်အကြောင်းအရာများကိုရယူပါ။ •ကစား
Yahoo Fantasy Slate, သင်အပတ်တိုင်းငွေသားအနိုင်ရရှိရန်အခွင့်အရေးရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန့်မှန်းချက်ဂိမ်းကိုစစ်ဆေးပါ။
•အားကစား0ယ်ယူမှုဘ0။ သူတို့ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာ။ အလင်းအိမ်, ကျွမ်းကျင်သူဆန်းစစ်ခြင်း, အယ်ဒီတာ့အာဘော်အကြောင်းအရာများ, အားကစားလောင်းကစားခြင်းအတွက်အသစ်? Yahoo Sportsbook သည် Bettor Myanmar မှယုံကြည်စိတ်ချရသောကျွမ်းကျင်သူများထံမှလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းမှအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန် Bettors အသစ်များစတင်ရန်လိုအပ်သည်။
Nothe: Yahoo Sports သည်အစစ်အမှန်ငွေကြေးဂိမ်းကိုမကမ်းလှမ်းပါ။ ၎င်းတွင်အားကစားလောင်းကစားခြင်းအကြောင်းအရာနှင့်ဒေတာများပါ0င်သည်။ Dreading ဂိမ်းစက် / လောင်းခြင်းအားလုံးသည် BetmGM, Betmgm, Betmgm တွင်ပြုလုပ်သည်။ BetMGM တွင်ပါ0င်သည်။ သင်လိုချင်သောအခါရမှတ်များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်များနှင့်အားကစားသတင်းများရယူပါ။ ဂိုးသွင်းခြင်းကစားခြင်းကိုလိုက်နာပါ။
LIKESS TRACESS: BR>
- ဘောလုံး - ဘောလုံး - သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ရှိဒေသခံနှင့် Primetime ဂိမ်းများအတွက်အခမဲ့နေထိုင်ခြင်း။ ဘောလုံးရမှတ်များ, မီးမောင်းထိုးပြခြင်းများ, သတင်းများ Breaking News & Watch ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ - ကောလိပ်ဘောလုံးနှင့် NFL ဂိမ်းများ, ကောလိပ်ဘောလုံးဘတ်စကက်ဘော, MLB - ဘေ့စ်ဘောဘတ်စကက်ဘော & Stats
- NBA, WNBA: Live NBA ဂိမ်းများကိုကြည့်ရှုခြင်း, ရမှတ်များနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်များ, NBA BRABERS Highlights, NBBL: ရမှတ်များ, လိဂ်, လိဂ်2ခု, လိဂ်တစ်ခု, စကော့တလန်ပရီးမီးယားလိဂ်, စကော့တလုကလိဂ်, ချန်ပီယံလိဂ်, > - La Liga, Copa Del Rey, Segunda ဌာန, စပိန်စူပါခွက်, PGA, LPGA, PGA, PGA SPRINGS, NASCAR Web.com ကား, ဖော်မြူလာ 1
- MMA လက်ဝှေ့
- တင်းနစ် - အမျိုးသား Tennis, အမျိုးသမီးတင်းနစ်ကြည့်လိုပါသလား။ အားကစားကိုစီးရန် Yahoo Sports ကို download လုပ်. တိုက်ရိုက်ရလဒ်များရရန် download လုပ်ပါ။
ဘာအသစ်လဲ Yahoo Sports: watch NFL games 9.19.2